Le မသန်စွမ်းမှုရည်ညွှန်း est informé par l’employeur de l’organisation de cette visite et peut y assister sous réserve de l’acceptation du salarié. Il ne pourra pas assister à l’entretien médical et à l’examen médical du salarié mais seulement aux échanges concernant les éventuelles mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste et/ou d’horaire.
8| အလယ်အလတ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လည်ပတ်မှုကို မည်သူ တက်ရောက်နိုင်သနည်း။ မေလ 8th, 2022Tranquillus
ဖတ်ရန် MS PowerPoint 2016 လေ့ကျင့်မှု - အခြေခံများကိုရယူခြင်း
လွန်ခဲ့သော1| အလယ်အလတ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လည်ပတ်မှုဆိုတာ ဘာလဲ။
အောက်ပါ4| အကြိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးခရီးစဉ်ကို ဘယ်သူက စတင်နိုင်မလဲ။
စတင်သူများအတွက် Microsoft Power BI အခြေခံများ